Fahamarinana iray, ilay tena fahamarinana
"Andriamanitra, Mpamonjy antsika ... tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina." 1 Timoty 2:3, 4
"Hoy Jesosy taminy : Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana ; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako." Jaona 14:6
Niady hevitra momba ny fivavahana ireto mpinamana roa vavy. Notezaina tao anaty tontolo tsy misy an'Andriamanitra i Eva, ka tsy mino Azy. Marine indray, teraka tao anaty fianakaviana kristiana, ary mino mafy an'i Jesosy. Hoy i Eva namarana ny resaka: «Mino indry;, satria teraka tao anatiny. Raha teraka tao anatina fianakaviana silamo indry;, dia ho resy lahatra fa ny fivavahana silamo no marina».
Na i Eva na i Marine dia samy voatariky ny tontolo nahalehibe azy avy, tsy azo nosakanana izany.
Saingy mipetraka hatrany ny fanontaniana: misy ve Andriamanitra sa tsia? Ny marina dia tsy miankina amin'izay tontolo nahaterahako, raha tsy izany dia tsy izy no ilay fahamarinana.
Tokana ihany ny marina, ary "ao amin'i Jesosy" izany (Efesiana 4:21). "Tonga ny Zanak'Andriamanitra... Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay" (1 Jaona 5:20).
Maro ny lehilahy sy vehivavy, samihafa fiaviana, nikaroka ny fahamarinana ary niondrika teo anatrehan'ny fanambaran'ny Baiboly. Nanaiky izy ireny fa Jesosy no "lalana sy fahamarinana ary fiainana". Ny fahamarinan'Andriamanitra dia niseho tanteraka tao amin'ny fiainan'i Jesosy, Izay nidina avy tany an-danitra. Olona lavorary Izy, ary Andriamanitra. Maty teo amin'ny hazofijaliana Izy, ary nitsangana tamin'ny maty. Niakatra any an-danitra Izy, ary efa eo ankavanan'Andriamanitra ankehitriny. Izay mino Azy dia mahafantatra ny lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana, izay mampifandray antsika amin'Andriamanitra ary mitarika antsika hahafantatra ny Ray.
Ny zava-dehibe dia tsy ny hoe teraka «tao anatiny» na «tany ivelany», fa ny mikatsaka ny fahamarinana ka manao izay tokony hatao: mino ny fahamarinana!